Manatona ny morontsiraka atsinanana : hitondra orana be i Carlos | NewsMada
Manatona ny morontsiraka atsinanana : hitondra orana be i Carlos
Tsy hiditra an-tanety eto amintsika ilay rivodoza Carlos na somary hanatona ny morontsiraka Atsimo Atsinanana aza, rahampitso alarobia, araka ny fanazavan’ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro eny Ampandrianomby, omaly. Hitondra orana amin’ny ilany atsinanana ny rambony ao anatin’ny andro vitsivitsy ho avy, hoy ny filazana manokana azo. Mandritra ny telo andro, hitohy ny orana ka misy ny filazana mena, loza mihatra momba ny habetsahan’ny rotsak’orana ao amin’ny distrikan’Ambilobe, Ambanja, Analalava ary i Nosy-Be. 50 mm ny refin’ny orana hirotsaka ao antin’ny 24 ora. Hiangona koa ny rano amin’ny faritra iva ka tokony ho mailo ny rehetra. Hihamafy ny rivotra manomboka anio tolakandro, ho an’ny morontsiraka atsinanana ka mampitandrina sahady ny mpampiasa ranomasina ny teknisianina.
Omaly tamin’ny 9 ora maraina, tany amin’ny 855 km atsinanan’i Toamasina no nisy ny foiben’i Carlos. Mbola antsoina hoe rivodoza izy na nihena aza ny heriny tao anatin’ny 6 ora lasa. Mahatratra 92 km isan’ora ny rivotra entiny ary tafakatra 130 km isan’ora ny tafiotra miaraka aminy. Tombanana ho niditra tao amin’ny Nosy Maorisy izy omaly. Manohy ny diany mianandrefana i Carlos ary mahavita 4 km isan’ora.
Momba ny toetry ny andro anio eto an-dRenivohitra, ho maina ny andro mandritra ny roa andro manaraka. Ny alarobia tombanana fa hisy oram-pahavaratra indray. Hitohy ny hafanana ka hahatratra 28 °C ny maripana ambony indrindra. Nisy ny fandatsahana orana farany ny asabotsy lasa teo no.